Ikhaya | Esasinenjini Isikebhe Motor yokulungisa
Leli sayithi linenhloso emibili:
Okokuqala: Sihlanganisa ezinye izikebhe ezisebukhosini. Leli sayithi laklanyelwe njengensiza yokusiza abanye benze okufanayo ngokubhala phansi isinyathelo ngasinye emininingwaneni enkulu kunaleyo ongayithola kumbhalo wenkonzo. Uma unemoto engaphandle efana neyodwa yamaphrojekthi ethu, kufanele ukwazi ukusebenzisa leli sayithi ukusiza ukukhipha imoto yakho yangaphandle.
Okwesibili: Leli sayithi liye laguqukela engxenyeni yezitolo. Umqondo ukukhombisa uhlu lwezingxenye ezihambisana ne-Johnson / Evinrude / OMC / BRP. Uma uchofoza ku-"List List Motor" imenyu engenhla, ungathola imoto yakho ohlwini bese ubona uhlu lwezingxenye zezimoto zakho kanye nama-Amazon ne-eBay izixhumanisi ukukusiza ukuthola ingxenye oyidingayo futhi uthole inzuzo enhle inqubo.
Le sayithi iqale eminyakeni engama-13 edlule futhi isize izinkulungwane zabantu, ezivela emhlabeni wonke, zilethele izikebhe zabo zangasese zokuphuma emkhunjini. Lapho ngiqhubeka ngisebenza nalezi zimoto zakudala, lapho ngithanda kakhulu. Njengoba le sayithi iguqukela, ngisebenza kumaphrojekthi amasha nama-athikili ukuze ujabulele. Leli sayithi liyaphila kakhulu.
Leli sayithi liye laba ngamazwe ngamazwe. Ungasebenzisa umkhethi welimi bese ukhetha kusuka kwezilimi ze-120! Uma uchofoza isixhumanisi se-Amazon noma i-eBay, uqondiswa esiteshini esifanele indawo yakho, imali, nolimi. Ama-motors wezikebhe ezingaphandle zibonakala zingenayo imingcele, imingcele yezombangazwe noma izilimi futhi leli sayithi likhona ukuze wonke umuntu ajabulele.
Sicela usize ukusekela le sayithi kanye namaphrojekthi wekusasa ngokusebenzisa izixhumanisi zethu zezitolo lapho uthengisa ingxenye. Noma yini oyithenga ngokusebenzisa ithuluzi lethu lokusesha i-Amazon.com izosiza ukusekela le sayithi. I-Amazon.com ingakusindisa imali ngoba ngokuvamile ihlunga ingxenye efanayo kusuka kubathengisi abancintisanayo. I-eBay yindawo enhle yokubheka amanani entengo, kanye nezingxenye ezingavamile nezasetshenziswa. Ngokuvamile uzothola umehluko omkhulu phakathi komthengisi noma intengo yohlu lokuthengisa, inani le-Amazon.com, ne-eBay intengo. Ungagcina imali eningi ngokuchofoza izixhumanisi zethu. Uma uthenga ingxenye usebenzisa i-Amazon yethu noma i-eBay links, sithola mayelana ne-5% ikhomishini esiyisebenzisayo ukukhokhela amaphrojekthi kanye nezindleko zokubamba ezihambisana nale sayithi. Awekho izindleko ezengeziwe kuwe uma usebenzisa izixhumanisi zethu ukuthenga imikhiqizo nokusekela le sayithi.
Siphinde sikumeme ukuthi ubheke isixhumanisi semenyu yethu "Amazwana" ngenhla.
Funda kabanzi mayelana Ungalungisa isikebhe sakho sokushayela imoto bese ubuyela emanzini ngaphandle kokuchitha imali eningi kumthengisi wasolwandle oyithengisa.